शहीद गेट नजिक वि ष्फोट, ठुलो क्षतिको आशंका !
काठमाडौं । ग्याँस सिलिन्डर वि ष्फोट हुँदा ठुलो क्षतिको आशंका गरिएको छ । धनगढीको शहीद गेटमा नजिक ग्याँस सिलिन्डर पड्कि एको हो । ग्याँस सिलिन्डर पड्किँ दा ६ जना गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ । घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले तीनको हताहती भएको बताएको छ । तर, यसको पुष्टि भने भएको छैन । उद्धार कार्य जारी रहेकाले थप विवरण हाउँन सकेको छैन ।
यस्तै, सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीका कम्युटर अपरेटरसिहत २ जना घुससिहत पक्राउ परेका छन् । डिभिजन कार्यालयका कम्युटर अपरेटर प्रकाश पौडेल र वाइल्ड स्ट्रोङ कन्सल्टेन्सीका सुमित शाही सेवाग्राहीबाट १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका हुन् । उनीहरुले कार्यकक्षमै सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गरेका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय पोखराबाट पुगेको टोलीले उनीहरुलाई कार्यालय परिसरबाटै पक्राउ परेको हो । कम्युटर अपरेटर पौडेलसँग सेटिङ मिलाएर कन्सल्टेन्सीका शाहीले बिचौलियाको भूमिका निभाएका थिए । सडकको भुक्तानी दिने सन्दर्भमा उनीहरुले घुस मागेको अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं – रायोको सागमा पाइन्ने भिटामिन ए, सी र के युक्त तत्वले हाम्रो शरीरमा एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्छन् । रायोको सागमा पाइने फोलिक र म्याग्नेसियमले शरीरमा रहने विभिन्न विकारयुक्त वस्तुलाई बाहिर निकाल्छ ।रायोको दाना पिसेर तरकारीमा हालेर खाँदा पाचन प्रक्रिया बलियो बन्छ । यसले भोक नलाग्ने
को बन्छ करोडपती नेपालमानै सुरु कमाउने हाेइन त लाखौ रुपैया? वा Oppo F7 Mobile Phone ल्यापटप पुरस्कार जित्ने हैन त ?उसाे भए समाचार भित्र गएर उत्तर दिनुहाेला ?
भाग्य बदल्ने दिन आएको छ । अब तपाईले KBC Quiz मा सहभागी भएर करोडपती वा लाखौ पुरस्कारको विजेता बन्न सक्नुहुनेछ । सहभागि हुनका लागि नियमहरु निम्न प्रकार रहेका छन्
१. तपाईले अनिवार्य रुपमा यो पेज लाईक गर्नुपर्नेछ । २. हामीले पोस्ट गरेको प्रश्नको सही जवाफ कमेन्ट वा म्यासेज मार्फत दिनुपर्नेछ ।
३. फेसबुकमा आफ्नो वास्तविक नाम नभएको खण्डमा कमेन्ट गर्दा आफ्नो नाम खुलाउनु पर्ने छ ।
४. सहि उत्तर दिए पश्चात यो पोस्ट आफ्नो फेसबुक वाल र पाँच वटा फेसबुक ग्रुपमा सेयर गर्नु पर्नेछ ।
आफ्नो वास्तविक नाम नभएको फेसबुक अकाउन्टबाट नाम नखुलाई गरिएको कमेन्ट वा म्यासेजबाट आएको उत्तरलाई गोलाप्रथामा समावेश गरिने छैन । . एउटै व्यक्तिले दुईवटा छुट्टाछुट्टै उत्तर दिएको खण्डमा कुनै पनि उत्तर मान्य हुने छैन ।
२०७५ चैत्र ९ गते दिउसो ११:०० बजेदेखि २०७५ चैत्र १५ गते बेलुका ९ बजे भित्र आएका सम्पूर्ण सही उत्तर दिने सहभागीहरु मध्ये १०० जना ले पहिलो चरणमा निःशुल्क भाग लिने अवसर पाउनुहुनेछ ।
साथै सहि उत्तर दिएर सबैभन्दा धेरै लाईक आएको कमेन्ट गर्ने १ जना सहभागीले Oppo F7 Mobile Phone पुरस्कार पाउनुहुनेछ । छनौट गोलाप्रथा बाट विजेता घोषणा गरिनेछ ।
सर्तहरु लागू हुनेछन् ।२०७५ चैत्र १० गते दिउसो ११:०० बजेदेखि २०७५ चैत्र २५ गते बेलुका ९ बजे भित्र आएका सम्पूर्ण सही उत्तर दिने सहभागीहरु मध्ये १०० जना ले पहिलो चरणमा निःशुल्क भाग लिने अवसर पाउनुहुनेछ ।
साथै सहि उत्तर दिएर सबैभन्दा धेरै लाईक आएको कमेन्ट गर्ने १ जना सहभागीले Oppo F7 Mobile Phone पुरस्कार पाउनुहुनेछ । छनौट गोलाप्रथा बाट विजेता घोषणा गरिनेछ । सर्तहरु लागू हुनेछन् ।